सीमा अ’तिक्रमण बढेपछि : भारतिय सीमा तर्फ स’शस्त्र प्रहरीका ५९ नयाँ सीमा पोस्ट थपिँदै सेयर गरौ ! – Life Nepali
सीमा अ’तिक्रमण बढेपछि : भारतिय सीमा तर्फ स’शस्त्र प्रहरीका ५९ नयाँ सीमा पोस्ट थपिँदै सेयर गरौ !
काठमाडौँ। सरकारले चीन र भारतसँग सिमाना जोडिएका थप ६३ स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को बोर्डर अब्जर्भर पोस्ट (बीओपी) राख्ने भएको छ। भारतीय सीमा क्षेत्रमा ५९ वटा र चिनियाँ सीमामा चारवटा बीओपी स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीलाई स्वीकृति दिएको छ , यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन्।
अहिले भारततर्फ नेपाली सीमा सु’रक्षा गर्न स’शस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को नेतृत्वमा ३५ जना रहने गरी १ सय ७ वटा बीओपी छन् । चीनसँग सीमा जोडिएका नाकामा स’शस्त्रको स्थायी बीओपी छैन। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको रसुवागढी–केरुङ र मुस्ताङको कोरला नाका सु’रक्षामा जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी खटिँदै आएको छ । अब चीनतर्फ दार्चुलाको तिंकर भन्ज्याङ–लिपुलेक र कालापानी, हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमन्थाङ र संखुवासभाको किमाथाङ्का नाकामा बीओपी राखिनेछ।
नेपाली भू–भाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर भारतले विवादित ‘राजनीतिक नक्सा’ सार्वजनिक गरेपछि गृह मन्त्रालयले उत्तर र दक्षिणतर्फ अतिक्रमित र मानव आवतजावत गर्न मिल्ने नाकामा थप बीओपी स्थापना गर्न लागेको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमै सीमा सु’रक्षाका लागि स’शस्त्रको थप फौज तैनाथ गर्न लागिएको औपचारिक जानकारी गराएका छन् ।
भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा सी’मा सु’रक्षा बल ९एसएसबी० लाई २ देखि ३ किमि दूरीमा तैनाथ गरेको छ । नेपालतर्फ भने स’शस्त्र प्र’हरीको एक बीओपीबाट अर्को बीओपीको दूरी १८ देखि २० किमिमा छ । नेपालको भारतसँग करिब १ हजार ८ सय ८० र चीनसँग १ हजार ४ सय १४ किमि सीमा छ ।
Previous हामी नेपाली बंगाली, भुटानी र पाकिस्तानी जस्ता होइनौं, मो’दिलाई गोर्खालीको पावर थाहा छैन ! कि कसो ? देश प्रेमीहरुले शेयर गरौँ।
Next हेर्नुहोस् : यो हो नेपालको खास नक्सा र जमिन (भिडियो )